साँचो ईश्‍वरको नाम के हो?
प्रहरीधरहरा | सङ्ख्या १ २०१९
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबीय काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाङगाना (मोजाम्बिक) चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चुभास चेक चोपी चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डिगोर डुआला डेनिश ड्रेहु तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोनापियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिजो मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन यापिज युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (भ्लाक्स, रुस) लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल लो जर्मन लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सरमक्कन सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
नयाँ व्यक्‍तिसित चिनजान बढाउन पहिला हामी तिनको नाम सोध्छौँ। तपाईँले साँचो ईश्‍वरलाई “तपाईँको नाम के हो?” भनेर सोध्नुभयो भने उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ होला?
“म यहोवा हुँ। मेरो नाम त्यही हो।”—यसैया ४२:८.
के यो नाम तपाईँले पहिला कहिल्यै सुन्‍नुभएको थियो? सायद थिएन होला। यो नाम हिब्रू भाषाको चार वटा व्यञ्जन वर्ण मिलेर बनेको हो। यी अक्षरहरूलाई अङ्‌ग्रेजीमा YHWH वा JHVH लेखिन्छ। यसलाई अङ्‌ग्रेजीमा “जेहोभा” र नेपालीमा “यहोवा” भनेर उच्चारण गरिन्छ। वास्तवमा बाइबलको मूल भाषाका लेखोटहरूमा साँचो ईश्‍वरको नाम लगभग ७ हजार पटक उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले थुप्रै बाइबल अनुवादकहरूले यो नाम आफ्नो अनुवादमा कतै-कतै मात्र उल्लेख गरेका छन्‌ र त्यसको ठाउँमा “परमप्रभु” भन्‍ने पदवी चलाएका छन्‌। त्यसैले यो नाम ओझेलमा परेको छ।
साँचो ईश्‍वरको नाम हिब्रू भाषाको मौलिक लेखोट र थुप्रै अनुवादमा पाइन्छ
मृत सागरमा फेला परेको भजनसङ्‌ग्रहको पाण्डुलिपि इस्वी संवत्‌ प्रथम शताब्दी, हिब्रू
टिन्डेलको अनुवाद १५३०, अङ्‌ग्रेजी
रेना-भालेरा संस्करण १६०२, स्पेनिश
युनियन भर्सन १९१९, चिनियाँ
साँचो ईश्‍वरको नाम जानेर के फरक पर्छ?
साँचो ईश्‍वर आफ्नो नामलाई महत्त्वपूर्ण ठान्‍नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाम आफैले रोज्नुभएको हो; उहाँको नाम कसैले राखिदिएको होइन। यहोवाले यस्तो घोषणा गर्नुभयो: “मेरो नाम सधैँका लागि यही रहनेछ अनि पुस्तौँपुस्तासम्म म यही नामले चिनिनेछु।” (प्रस्थान ३:१५) बाइबलमा ईश्‍वरको नाम सर्वशक्‍तिमान्‌, बुबा, परमप्रभु वा परमेश्‍वर जस्ता ईश्‍वरको पदवीभन्दा धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ। साथै उहाँको नाम अब्राहाम, मोसा, दाउद वा येसु जस्ता बाइबल पात्रहरूको नामभन्दा धेरै पटक उल्लेख भएको पाइन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो नाम यहोवा हो भनेर सबैले थाह पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। बाइबल भन्छ: “मानिसहरूले जानून्‌ कि तपाईँ, जसको नाम यहोवा हो, सारा पृथ्वीमा तपाईँ मात्र सर्वोच्च हुनुहुन्छ।”—भजन ८३:१८.
साँचो ईश्‍वरको छोरा येसु यस नामलाई महत्त्वपूर्ण ठान्‍नुहुन्छ। येसुले आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनुभयो: “तपाईँको नाम पवित्र पारियोस्‌।” (मत्ति ६:९) उहाँ आफैले पनि प्रार्थना गर्नुहुँदा यसो भन्‍नुभयो: “हे बुबा, तपाईँको नाम महिमित पार्नुहोस्‌।” (युहन्‍ना १२:२८) येसुले साँचो ईश्‍वरको नाम महिमित पार्ने कामलाई जीवनमा पहिलो स्थान दिनुभयो। त्यसैले उहाँले प्रार्थना गर्दा यसो भन्‍न सक्नुभयो: “मैले तिनीहरूलाई तपाईँको नाम प्रकट गरेको छु र प्रकट गर्नेछु।”—युहन्‍ना १७:२६.
साँचो ईश्‍वरलाई चिन्‍नेहरू यस नामलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छन्‌। प्राचीनकालमा साँचो ईश्‍वरका सेवकहरूले सुरक्षा र छुटकारा पाउन उहाँको नाम पुकार्नुपर्छ भनेर बुझेका थिए। “यहोवाको नाम बलियो धरहरा हो; धर्मी मानिस त्यहाँ कुदेर जान्छ र शरण पाउँछ।” (हितोपदेश १८:१०) “हरेक जसले यहोवाको नाम पुकार्छ, उसले उद्धार पाउनेछ।” (योएल २:३२) साँचो ईश्‍वरको उपासकहरू उहाँको नाम पुकार्छन्‌। त्यसैले तिनीहरू अरू धर्म मान्‍ने मान्छेहरूभन्दा फरक छन्‌ भनी बाइबलले देखाउँछ। “जातिजातिका मानिसहरू आ-आफ्ना देवताको नाममा हिँड्‌नेछन्‌ तर हामी भने सदासर्वदा यहोवा हाम्रा परमेश्‍वरको नाममा हिँड्‌नेछौँ।”—मिका ४:५; प्रेषित १५:१४.
यो नामले के प्रकट गर्छ?
यो नामले ईश्‍वरको छुट्टै चिनारी दिन्छ। थुप्रै शास्त्रविद्‌अनुसार यहोवा नामको अर्थ “बन्‍ने र बनाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ” भन्‍ने हो। आफ्नो नामको अर्थ के हो भनेर बुझाउन यहोवाले मोसालाई यसो भन्‍नुभयो: “म जे बन्‍न चाहन्छु, त्यही बन्‍नेछु।” (प्रस्थान ३:१४) स्पष्ट छ, उहाँको नामले उहाँलाई सबै थोकको सृष्टिकर्ताको रूपमा मात्र चिनाउँदैन। यसले उहाँ आफ्नो उद्देश्‍य पूरा गर्न आवश्‍यकताअनुसार जे पनि बन्‍न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सृष्टिलाई जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्‍ने कुरा बुझाउँछ। ईश्‍वरलाई पुकार्न चलाइने उपनामहरूले उहाँको ओहदा, अख्तियार वा शक्‍तिलाई बुझाउँछ। तर उहाँको नाम यहोवाले मात्र उहाँ वास्तवमा कस्तो व्यक्‍ति हुनुहुन्छ र के बन्‍न सक्नुहुन्छ भनेर प्रकट गर्छ।
यो नामले ईश्‍वर हाम्रो चासो लिनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। ईश्‍वरको नामको अर्थबाट उहाँ हामीलगायत आफ्ना सबै सृष्टिको ख्याल राख्नुहुन्छ भनेर बुझिन्छ। हामीले उहाँको नाम थाह पाएको र प्रयोग गरेको चाहनुभएकोले नै उहाँले आफ्नो नाम प्रकट गर्नुभएको हो। कुरा स्पष्ट छ, हामीले उहाँलाई कुनै परिचय नभएको काल्पनिक व्यक्‍ति होइन तर वास्तविक व्यक्‍तिको रूपमा हेरेको उहाँ चाहनुहुन्छ।—भजन ७३:२८.
साँचो ईश्‍वरलाई नाम लिएर पुकार्दा उहाँप्रतिको हाम्रो चासो देखिन्छ। उदाहरणको लागि, कसैसित मित्रता गाँस्न चाहनुहुन्छ भने तिनले पक्कै पनि तपाईँको नाम लिएको चाहनुहुन्छ। तर तिनले तपाईँको नाम लिँदैनन्‌ भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तिनी तपाईँसित मित्रता गाँस्न चाहँदैनन्‌ भन्‍ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ होला। ईश्‍वरको विषयमा पनि त्यस्तै हो। उहाँले आफ्नो नाम प्रकट गर्नुभएको छ र त्यो नाम हामीले प्रयोग गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामीले नामै लिएर उहाँलाई पुकाऱ्‍यौँ भने उहाँसित घनिष्ठ हुन चाहन्छौँ भनेर देखाइरहेका हुन्छौँ। किन? “उहाँको नामबारे सोच्नेहरू [वा “उहाँको नामलाई अनमोल ठान्‍नेहरू,” फुटनोट]”-लाई उहाँ याद गर्नुहुन्छ।—मलाकि ३:१६.
साँचो ईश्‍वरको नाम थाह पाउनु उहाँलाई चिन्‍ने पहिलो कदम हो। तर उहाँको नाम थाह पाएर मात्र पुग्दैन। उहाँ वास्तवमा कस्तो व्यक्‍ति हुनुहुन्छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ।
साँचो ईश्‍वरको नाम के हो? साँचो ईश्‍वरको नाम यहोवा हो। यो नामले उहाँको छुट्टै चिनारी दिन्छ। यसले उहाँ आफ्नो उद्देश्‍य पूरा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनी चिनाउँछ
साँचो ईश्‍वर कहाँबाट आउनुभयो?
यो प्रश्‍न धेरैजसो मानिसको मनमा उठ्‌छ। सायद तपाईँको मनमा पनि उठेको थियो होला। यसलाई यसरी विचार गर्न सक्छौँ: यस ब्रह्‍माण्ड र यसमा भएका सबै कुराहरू कुनै स्रोत वा सृष्टिकर्तामार्फत अस्तित्वमा आएका हुन्‌ भने ईश्‍वरचाहिँ कहाँबाट आउनुभयो त?
यो भौतिक ब्रह्‍माण्डको सुरुवात छ भनेर प्रायजसो वैज्ञानिकहरूले मानिलिन्छन्‌। यो कुरा बाइबलले पनि मानिलिन्छ। यसको पहिलो शास्त्रपदमा यस्तो लेखिएको छ: “सुरुमा परमेश्‍वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।”—उत्पत्ति १:१.
यो ब्रह्‍माण्ड आफै अस्तित्वमा आएन; यो अस्तित्वमै नभएको कुराबाट आएको हुनै सक्दैन। अस्तित्वमै नभएको कुराबाट कुनै कुरा अस्तित्वमा आउन सक्दैन। यदि ब्रह्‍माण्डको सुरुवातअघि कुनै कुरा थिएन भने आज यो ब्रह्‍माण्ड पनि अस्तित्वमा हुने थिएन। हुनत यसबारे हामी सबै कुरा बुझ्न सक्दैनौँ तर सधैँ अस्तित्वमा भएको अदृश्‍य स्रोतबाट नै यो ब्रह्‍माण्ड अस्तित्वमा आएको हुनुपर्छ। साँचो ईश्‍वर यहोवा जो सर्वशक्‍तिमान्‌ र बुद्धिमान्‌ व्यक्‍ति हुनुहुन्छ, उहाँ नै सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ।—युहन्‍ना ४:२४.
बाइबलले यहोवाबारे यसो भन्छ: “पहाडहरूको जन्म हुनुअघि नै, तपाईँले पृथ्वी र उर्वर भूमिलाई अस्तित्वमा ल्याउनुअघि नै, अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्‍वर हुनुहुन्छ।” (भजन ९०:२) हो, साँचो ईश्‍वर सधैँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। उहाँले नै “सुरुमा” ब्रह्‍माण्ड सृष्टि गर्नुभयो।—प्रकाश ४:११.
परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास बढाउने परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास परमेश्‍वर बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ
साँचो ईश्‍वर कस्तो हुनुहुन्छ?
ईश्‍वरका मुख्य गुणहरू के-के हुन्‌?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने साँचो ईश्‍वरको नाम के हो?
साँचो ईश्‍वरले के गर्नुभएको छ?
साँचो ईश्‍वरले के गर्नुहुनेछ?
साँचो ईश्‍वरलाई चिन्दा कस्तो फाइदा हुन्छ?
तपाईँ साँचो ईश्‍वरसित घनिष्ठ हुन सक्नुहुन्छ
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा साँचो ईश्‍वर को हुनुहुन्छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा साँचो ईश्‍वर को हुनुहुन्छ?
प्रहरीधरहरा साँचो ईश्‍वर को हुनुहुन्छ?